Iindaba -Ungajongana njani nokuxinana kwe-osmosis membrane
Inkqubo yokubuyela umva osmosis yinxalenye ebalulekileyo yesixhobo sokucoca amanzi esicocekileyo esincinci kunye naphakathi, kodwa kukwakhona ingozi efihliweyo kwinkqubo ye-osmosis yokubuyela umva, oko kukuthi, umphezulu we-reverse osmosis membrane kulula ukwenza uxinzelelo lwe-polarization nge-solute okanye ezinye izinto ezigciniweyo, eziza kuchaphazela umgangatho wamanzi amdaka kwizixhobo zokucoca amanzi.
1. Ukwanda kwendlela yesantya
Okokuqala, sinokwamkela amanyathelo aqhele ukusetyenziswa kumzi mveliso weekhemikhali ukwandisa ukuphazamiseka. Oko kukuthi, zama ukonyusa isantya somgama wolwelo oluhamba ngaphezulu kumphezulu wenwebu. Ixesha le-adsorption le-solute linokuncitshiswa ngokunciphisa ixesha lokuhlala kolwelo kunye nokwandisa isantya samanzi kulwelo oluncinci kunye nophakathi oluzenzekelayo lwezixhobo zonyango olusulungekileyo lwamanzi.
Umzekelo, ama-29 ~ 100um amanqanaba afakwa kulwelo oluphathwayo kwaye ahamba ngenkqubo ye-osmosis yokubuyela umva ngokudibeneyo ukunciphisa ubukhulu bomaleko womda we-membrane kunye nokunyusa isantya sokuhambisa. Izinto zebhola zingenziwa ngeglasi okanye i-methyl methacrylate. Ukongeza, inkqubo ye-tubular reverse osmosis, ibhola yesiponji encinci inokugcwaliswa kulwelo lokutya. Nangona kunjalo, kwipleyiti kunye nohlobo lwesakhelo sohlobo lweemodyuli, indlela yokongeza i-filler ayifanelekanga, ikakhulu ngenxa yomngcipheko wokuthintela ukuhamba kwejelo.
3. indlela Pulse
Umatshini wokubetha wongezwa kwinkqubo yezixhobo zokucoca amanzi. Ubungakanani kunye nokuphindaphinda kwepulse kwahlukile. Ngokubanzi, kokukhona ubukhulu kunye nokuphindaphindeka kokukhona kukhula isantya sokuhamba. Udushe lusetyenziswa ngokubanzi kuzo zonke izixhobo zovavanyo. Amava abonisa ukuba umlinganiso wokudlulisa ubunzima unobudlelwane obulinganayo nenani leenguqulelo ze-agitator.
4. Ukufakwa kwesikhuthazi sokukhuthaza
Abaxhasi be-Turbulence ziintlobo ngeentlobo zezithintelo ezinokuphucula indlela yokuhamba. Umzekelo, izinto ze-tubular zifaka ngaphakathi i-baffles. Kwicwecwe lepleyiti okanye loqengqeleki wohlobo lwembumba, umnatha kunye nezinye izinto zinokufakwa ngaphakathi ukukhuthaza isiphithiphithi. Iziphumo zokukhuthaza isiphithiphithi zilungile kakhulu.
5. Yongeza isikali sesithinteli
Ukuthintela umva we-osmosis inwebu ekulinganiseni izixhobo zonyango, isulfuric acid okanye i-hydrochloric acid yongezwa ukulungelelanisa ixabiso le-pH. Nangona kunjalo, ngenxa yokubola kunye nokuvuza kwenkqubo ye-asidi, umqhubi ukhathazekile, ke isikali sesithinteli esasasazwayo ngokubanzi songezwa ukugcina ukusebenza okuqhelekileyo kwenkqubo yokunyanga amanzi.